Asan-dahalo any Befotaka – Fokonolona an-jatony miaro an-dRemenabila - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Asan-dahalo any Befotaka – Fokonolona an-jatony miaro an-dRemenabila
Mihasarotra. Mbola ady mafy no miandry ireo mpitandro ny filaminana mampandry tany any Labohazo-Betroka. Hatramin’ny omaly dia fantatra fa mamahatra ary tsy manaiky ny hiala ao Labohazo i Remenabila sy ireo dahalo miara-dia aminy. Voalaza fa misy olona an-jatony, ahitana zaza amam-behivavy manampy azy amin’izany, ka maha sarotra ny raharaha.
« Mbola misy omby an-jatony ao Mihary, kaominina Mahakibo any Betroka ihany izay giazan-dRemenabila. Raisin’ireo mponina ao an-toerana ho toy ny olobe i Remenabila ka tena ampian’izy ireo. Vonona ny hiaro an’io dahalo rain-dahiny io mihitsy ireo olona ireo. Mba hisorohana ny mety ho fahafatesan’olona maro hateraky ny fifandonana dia miezaka mandresy lahatra ireo raiamandreny sy olobe iray fihaviana amin-dRemenabila ny jeneraly Manankay Augustin izay efa any an-toerana», hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny zandary.
Tsy mipetra-potsiny ireo mpampandry tany any an-toerana tato anatin’ny andro vitsy lasa izay.
« Ny alahady teo dia nanafika tao Ankazolahy, tanàna iray tsy lavitra an’Iabohazo misy ny fonenan’ny rafozan-dahin-dRemenabila ireo miaramila, nikasa ny hisambotra an’ity farany. Mahagaga anefa fa lavenona sisa no novantanin’izy ireo. Efa may avokoa ilay tanàna iray manontolo. Tsy fantatra izay nandoro azy », hoy ihany ny loharanom-baovao.
Mikasika ireo razana hita indray dia milaza ny kolonely Randriamahavalisoa Gérard, talen’ny fiarovana sy ny fanangonam-baovao eo anivon’ny kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena fa « tsy mbola misy tatitra voarain’izy ireo mikasika izany ».
Dahalo 100 manafika koa any Tsiroanomandidy Mirongatra ihany koa ny dahalo any Tsiroanomandidy. Omaly tokony ho tamin’ny 4 ora maraina dia dahalo manodidina ny 100 isa no nanafika ny tananàn’i Miaranarivokely-Fiakarantsoa any Bemahatazana. Nisy ny fifandonana teo amin’ny zandary, miaramila avy amin’ny tafika sy ireo dahalo.
« Omby an-jatony no lasan’ireo dahalo tamin’io fanafihana io. Natao ny fanarahan-dia ka rehefa nifankatazana ireo fokonolona miaraka amin’ny mpitandro ny filaminana sy ireo dahalo izay mirongo fitaovam-piadiana ihany koa dia nisy ny fifampitifirana. Dahalo telo no maty ary miaramila avy amin’ny tafika iray no naratra», hoy ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny seraseran’ny Zandarimariam-pirenena.
FIFANDRAISANA-Mankasitraka ireo mpiara-miasa aminy ny Airtel Nanomboka tamin’ny volana septambra lasa teo ny fifaninanana karakarain’ ny orinasam-pifandraisana Airtel Madagascar amin’ireo mpiara-miasa aminy, mpaninjara sy mpivarotra amin’ny alalan’ilay hetsika «Mandresy miaraka amin’ny Airtel». Ny varotra karatra «Sim» sy fahana elektronika «Speed» no ankasitrahan’ity orinasa ity ireo mpiara-miasa ireo, hatramin’ny volana desambra ho avy izao. Hisy ny loka hozaraina isam-bolana, izay efa nosantarina tamin’ny sabotsy lasa teo ny fanomezana izany ho an’ireo mendrika, ka nahazoan-dRazafiarison Jean Paul sy Rakotozafy Roland Félix vola amin’ny finday mitentina Ar 200 000 sy Ar 100 000 avy. Amin’ny volana septambra kosa no hanolorana ny loka goavana, ahitàna môtô Scooter, vata fampangatsiahana, fahitalavitra lehibe ary finday maro. Hahatratra 67 kosa ny fitambaran’ny fahana vola amin’ny finday, amin’ny alalan’ny Airtel Money ao anatin’ny efa-bolana. Ireo mahalafo vokatra betsaka an’ny Airtel voalaza ery ambony dia afaka mandray anjara amin’ity fifaninanana ity avokoa. Hanitry Ny Aina
KAOMININA ANTSIRABE-Tsy mbola misy vahaolana ny fitokonan’ ny mpiasa Efa miditra herinandro faharoa ny fito­konana ataon’ireo mpiasan’ny kaominina ambonivohitra Antsirabe. Tsy mbola ahitam-bahaolana hatramin’izao ireo fitakiana ataon’ny mpiasa. Anton’ny fitokonana raha ny voalazan’ireo mpiasa, dia ny tsy mbola nandraisan’izy ireo karama roa volana sy ny ampahany amin’ny fisondrotan-karama tamin’ny taona 2012, izay mbola tsy azo ary ny fanam­piana amin’ny fidiran’ny mpianatra. Efa nisy ny fihaonana nataon’izy ireo tamin’ny lefitra faharoa an’ny delegasiona manokana mitantana ny tanàna tamin’iny herinandro iny ka nampanantenan’ity farany azy ireo fa hisy ampaham-bola hivoaka amin’ny fiandohan’ ity herinandro ity. Tonga nitaky io vola io ireo mpiasa, omaly talata saingy tsy tonga tao an-toerana ity farany. Ny lefitra voalohany, Andrianarison Olivier avy eo no nandamina sy niezaka niresaka tamin’ ireo mpiasa saingy nafana ny adihevitra ka dia rava maina indray ny fihaonana. Niangavy ireo mpiasa mba hiverina hiasa io tompon’andraikitra io ary nilaza fa efa misy loharanom-bola nampanantenain’ny Faritra sy ny minisitera mpiahy ary ny foiben-ketra tokony ho avy amin’ity herinandro ity. Andaniny anefa dia milaza ny tsy hiverina hiasa mihitsy ireo mpiasa raha tsy efa milamina tanteraka ny olan’izy ireo. Angola Ny Avo
VONJY VOINA AO AMBANJA-Nofanina hanavotra olona any anaty rano ireo mpamonjy voina Nandalina indray ny fiofanan’izy ireo momba ny vonjy voina sy ny ady amin’ny hain-trano ireo mpamonjy voina ao Sambirano Ambanja. Nampianarina ireo fenitra tokony ho arahana raha hamonjy olona latsaka any anaty lava-drano ireo mpamonjy voina 35 mianadahy nandritra io fiofanana io. Nampanaovina fanazarantena arahina fisalorana ireo kojakoja ilain’ny mpamonjy voina amin’ny fanavotana olona lasan’ny rano ihany koa izy ireo. «Fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpamonjy voina malagasy amin’ny fomba fanavotana olona lasan’ny rano na ranomasina no tanjona tamin’io fanazarantena io», hoy i Hello Franck, avy ao amin’ny fikambanan’ireo mpamonjy voina ao Normandie (PHN). Nisy fito izy ireo no tonga nanofana ireo mpamonjy voinan’i Sambirano tamin’ity taona ity. Tao anatin’ny folo andro nandalovan’ireto mpanofana ireto anefa dia efa afaka nampihatra ny lesona azony mahakasika ny ady amin’ny hain-trano ireo mpamonjy voina malagasy ireo. Tanàna roa saika levon’ny afo no avotr’izy ireo. Nisy olona latsaka tany anatin’ny ony ihany koa nampiharana ireo fiofanana mahakasika ny fanavotana olona any anaty rano. Trano telo may sy zaza iray naratra ihany koa no avotr’izy ireo, tany Ambalavelona, 6 kilometatra miala ny tampon-tanànan’ Ambanja, ny zoma lasa teo. Ny hampihenana ireo loza sy hiarovana bebe kokoa ny olona sy ny fananany ao Ambanja no tanjon’io fiofanana io. Hofaranana amin’ny alalan’ny lanonana tanterahana rahampitso ny fiofanana nomen’ny PNH ireo mpamonjy voina ireo. Raheriniaina/HNA
FAMPIELEZAN-KEVITRA ALOHAN’NY FOTOANA-Niafara tamin’ny tora-bato ny hetsika politika tao Antsirabe Nanao sesilany niatrika ny vahoakan’ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ireo kandidà ho filoham-pirenena sasany, nandritra iny faramparan’ ny herinandro iny. Nisan-tatra izany ny jeneraly, Camille Vital notronin’ireo artista toa an’ny Marion sy Raboussa ary Firmin sy Mamy Gotso. Kandidà namangy an’Antsirabe ny sabotsy lasa teo kosa ny avy amin’ny Antoko Miombon’ezaka (Ame), notarihin’ny kandidany, Clément Ravaloson. Fihaonana tamin’ireo mpomba azy vitsivitsy kosa no nataony tao amin’ny “Antsirabe Hotel”. Hetsika roa goavana koa no nentin’ny kandidà Dr Jean Louis Robinson avy amin’ny antoko Avana sy ny kandidan’ny Malagasy tonga saina (Mts) nihaona tamin’ny vahoakan’ Antsirabe ny sabotsy sy ny alahady teo. Tonga nano-trona ity voalohany ireo mpiara-dia aminy avy ao amin’ny “firehana Ravalo-manana”. Hetsika sy kilalao maro kosa no nentin’i Roland Ratsiraka sy ireo ekipany nanentana ny mponin’ Antsirabe ny alahady. “Mbola tafiditra ao anatin’ ny ’Fihavanana Tour’, izay natomboka efa-taona lasa ity hetsika ity fa tsy hoe fampielezan-kevitra akory”, hoy ity kandida ho filoham-pirenena ity. Samy nahaliana olona maro avokoa ireo hetsika ireo saingy ratsy fiafara ireo hetsika roa farany. Raha vao lasa mantsy ireo kandidà sy ny mpiara-dia aminy dia tora-bato hatrany no nasesin’ireo olon-tsy fantatra ireo mpanakanto sy ireo mpanatrika. Olona telo no fantatra fa naratra vokatr’ izany ny sabotsy, raha olona telo no voasambotra. Angola Ny Avo
Fiangonana manana olana – Mpitondra fivavahana voavono tao anaty fotoam-bavaka Nikorontana ny fotoam-pivavahana natao tao amina fiangonana zokiny iray tany Farafangana, ny alahady 30 jona teo. « Andian’olona maromaro no niditra tao amin’ilay fiangonana raha vao nanomboka kelikely ny fotoam-pivavahana. Ny mpitondra fivavahana tao amin’ity fiangonana ity teo aloha no nitarika ireo olona ireo, ka raha vantany vao tafiditra izy ireo dia nida-roka ireo mpitondra fivavahana nitarika ny fanompoam-pivavahana », hoy ny tatitra azo avy amin’ny zandarimaria any an-toerana. « Raha vao niseho ny korontana tao amin’ilay fiangonana dia niantso zandary ireo mpivavaka ka niditra an-tsehatra ny zandary 10 nisambotra ireo nanakorontana. Olona efatra no voasambotra », hoy ihany ny mpitandro ny fila-minana. Resa-bola Raha ny voalazan’ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia resaka fano-dinkodinana ny vola fanam- piana azon’ny fiangonana no nahatonga ny koron-tana. « Nilaza ho maha-fantatra ny tena marina mikasika an’io fiangonana io ireo olona niditra tampoka tao anaty fotoam-pivavahana. Ireo mpivavaka anefa tsy nahalala izany fa hiva-vaka no nalehan’izy ireo tao ka izay no niampangan’izy ireo ireo olona sasany ho mpanakorontana », hoy ilay loharanom-baovao. « Misy olona iray mbola karohina fatratra amin’izao fotoana izao, voa- tondro ho nanodinkodina ilay vola tao amin’ilay fiangonana », hoy ny nambaran’ny teo anivon’ny zanda- rimaria tany an-toerana. Voatery nanatanteraka fivoriana manokana mihitsy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana omaly tolakandro hifehezana an’ity raharaha ity. Haja Randrianantoandro Hijery hafa
Befotaka, Mpanoratra Rijakely, 20.06.2012, 08:38	FIARAHAMONINA
city of god imdb http://www.aoraha.com/post1835/va-dui-penalties.html payday loans salisbury md valtrex for reducing transmission of genital herpes dosing of phenergan gel